एस्ता छन् बच्चाको उचाई बढाउने उपाय - ज्ञानविज्ञान
१.बढ्दै गरेका बालबालिका निद्रा पुग्ने गरी सुतेका छन् कि छैनन् ?कम्तीमा पनि १० देखि १२ घन्टा सुत्नु आवश्यक छ । सुत्दा ग्रोथ हार्मोन उत्पादन हुन्छ र वृद्धिलाई सघाउ पुर्‍याउँछ । आराम नगर्दा पनि बच्चाको हाइट ठीकसंग बढ्दैन ।
Don't Miss it प्रेम कति प्रकारको हुन्छ ? जान्नुहोस
Up Next योगा नै किन गर्नुपर्छ ? जान्नुहोस